Hebei Jiake Qalabka alxamdarka Co., Ltd.
Diiradda saar warshadaynta mesh mashiinnada mesh
Xalalka mashiinka dabacsanaan leh ee tikniyoolajiyada weld Advanced ee warshadaha
Shirkadda JIake ee soo saarta Shirkadda ugu fiican ee mashiinnada mesh-ka birta ah ee Shiinaha
20 sano oo waayo-aragnimo joogto ah u ah horumarinta warshadaha soo-saarka makiinadaha fiilooyinka mesh siligga.
Awoodda isbadal ee casriyeynta ee badeecadaada qaaska ah.
Hebei Jiake Alxanka Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1999 waxayna ku taalaa wadanka Anping, gobolka Hebei, Shiinaha. Waa mashiinka mesh mashiinka wax soo saarka ee xalka dalabka tikniyoolajiyada xallinta dalabka waxayna ka go'an tahay bixinta xallinta mesh silsiladaha xallinta ee adeegsadayaasha adduunka.
Ka dib in kabadan 20 sano oo horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo ah, mashiinka JIAKE wuxuu noqday soosaaraha ugu sareeya Shiinaha ee qalabka mesh. Aagga waxsoosaarka alxanka mesh silig-dhamaadka sare, mashiinada Jiake waxay aasaaseen tiknoolajiyad alxamadeed oo hor leh iyo xirfadle. Aagga mashiinnada wax lagu tolo ee mesh siligga ah, waxaan sidoo kale aasaasnay ​​geedi-socodyo teknolojiyadeed oo qumman iyo kooxo adeeg xirfad-yaqaannimo ah iyadoo loo marayo iskaashi lala yeesho soo saarayaasha kale.
Diirada saar bixinta xalalka mesh mashiinka alxanka iyo mesh mashiinada tolida mesh.
- Waxaad xoogga saartaa bixinta xalka mashiinka alxanka mesh iyo mesh netting tiding.
Qalabka JIake wuxuu ku takhasusay R&D, waxsoosaarka iyo suuqgeynta Mashiinka Welding Mashiinka, Fence panel welded Machine, Cage Mesh Welding Machine, Reinforcing Mesh Welding Mashiinka, Mashiinka Wire Mesh Machine, Chain Link Fencing Mashiinka, Mashiinka Xareynta Shabakada Xaragada, Mashiinka Xargaha, Mashiinka Mesh Mashiinka la ballaariyey, iyo Mashiinka Sawirka Xargaha, iwm.
Wax soo saarka iyo teknoolojiyada waxay heleen shatiyadaha qaranka, waxayna leeyihiin shahaadada CE, shahaadada FTA, Foomka E, Foomka F oggolaanshaha. Baasaboorka mashiinka, bixintaada kastamka ma noqon doonto wax dhibaato ah.
MAALINTII SANADKA 1999
QAAR KA MID AH CADDEENA
Suuqyada SANADKA GLOBAL
Suuqyada dibedda, JIAKE Makiinado ayaa ka iibiyey in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan.